Yintoni ongayidla kwisithuba ngaphambi kwePasika, zokupheka kunye nezithombe zezitya eziphilileyo. Ukutya ngaphambi kwePasika, yintoni ongayidla kwisithuba
Indlu yasekhaya Recipes Okunye Kwitheyibhi yokuzonwabisa IPasika
Yintoni ongayidla kwisithuba ngaphambi kwePasika, zokupheka kunye nezithombe zezitya ezilula kunye nezolisayo
Ukuzila phambi kwePasika
Iholide evulekileyo yovuko lukaKristu ilandelwa liLente elide kunazo zonke. Ihlala iintsuku ezingama-40 kwaye idinga ukuba amakholwa athobe kwaye anqande izilingo ezininzi kunye nezilingo. Ukuqala kwexesha lokuziyeka ngo-2016 luwela ngoMatshi 14, kwaye ukuphela ngo-Apreli 30. Kwiiveki ezi-7 awukwazi ukutya ukutya okunamafutha kunye ne-high-calorie, inyama yeyiphi na iindidi, ubisi, iilekese namaqanda. Kwakhona kunye nokuthintela okunzima utywala kunye nocuba.
Indlela yokupheka i-vinaigrette ye-classic ibhotela, okanye Yintoni ongayidla kwisithuba ngaphambi kwePasika ukusuka kuma-saladi
I-Easter 2016: Ukuzila
I-vinaigrette yendabuko evela kwimifuno ebilisiwe kunye ne-tinned edibeneyo imele imenyu ephilileyo ngaphambi kwePasika. Ukuba awunayo ioli yeoli yeqhumiso kwiminwe yakho, ivunyelwe ukugcwalisa isaladi kunye nemifuno engavumelekanga. Iimpawu zokunwa kwiindawo ezinjalo aziyi kuphazamiseka nantoni na.
iifatata - 4 ii-pcs.
Beetroot - ama-3 ama-pcs.
ikhukhamba ekhethiweyo-2 ii-pcs
izaqathe - iziqhekeza ezi-2
iipayini zamathanga - 1 zinako
imifino - 1/3 yesibonda
ioli ye ngqolowa
Iipatates, iinqotyi kunye neebhontshisi ubilise ide iphekwe, ipholile kwaye ihlambuluke.
Ukucima iifolo kwi-colander, kwi-glass excessive glass.
Imifuno ebilisiwe kunye namakhukhamba aqhotyoshelwe kwii cubes ezilinganayo. Beka zonke iimveliso kwisitya esiphezulu se-salad, ityuwa, i-pepper, uthele kakhulu ngeoli yegesi uze udibanise kakuhle.
Ifomu kwisitya sokutya esivela kwisiqhamo semifuno ulungelelaniso olufanelekileyo uze uyibeke efrijini imizuzu engama-30-40 ukuze zonke izixhobo zihlanjwe ngokugqoka. Emva koko ugcobe ngamacube omnandi uze usebenze kwitafile.
Isitya esinomdla kunye nesempilweni kwithuba phambi kwePasika - i-porridge of lentils
I-Easter - Iposi lika-2016
I-lentil porridge iya kunceda ukuzalisa umzimba ngobuninzi bezinto ezixabisekileyo kubantu, i-micronutrients kunye namavithamini, ukuphucula inkqubo yokutya kunye nokuphelisa ngokupheleleyo imizwa yokulamba. Isitya esiqhumayo kufuneka sihlawule abo balandela umzobo kwaye bahambelane nokutya.
iilentils - 250 g
amanzi aphethwe - 250 ml
iinqathi - 1 pc
igalikhi - 1 clove
anyanisi - 1 pc
eluhlaza - ¼ yesithambile
Ama-anyanisi agxotha i-husk, etyunjwe kwiikhabhi, atyunwe kwipuphu encinci, athulule kwioli yemifuno kwaye ugcine kwiqondo eliphakathi kwe-1-2 imizuzu.
Geza iinqatyi, gubha kwi-grater enkulu, yongeza u-anyanisi upheke uze udibanise imifuno.
Iilentili kufuneka zihlanjwe ngobuninzi bamanzi ahambayo, zihlambuluke kwaye zongezwe kwi-kroti kunye no-onion mass. Phalaza amanzi aphelileyo okushisa kwegumbi, ityuwa kunye nepilisi ukunambitha, ukugubungela ngesiqhekeza, ukwenza umlilo obuthathaka kwaye udibanise malunga nemizuzu engama-25 ukuya kwe-30. Ngeli xesha, ubuninzi bombane buya kuphazamiseka, kwaye iinkozo ziya kuzuza ukulungelelanisa okufunekayo.
Ekugqibeleni, ixesha kunye negarlic, idlula kwi-press, isuse kwiplani uze uyivumele ukuba ibe yimizuzu eyi-10-15. Emva koko ufake kwisitya sokukhonza, ufefe ama-herbs acocekileyo kwaye usebenze kwitafile.
Ziziphi izitya zabantu baseRussia abapheka i-Easter, fumana apha
Yintoni ongayidla kwisithuba ngaphambi kwePasika ukusuka kwiitya zokuqala: iresiphi yesobhobe esimuncu kunye namakhowe
Shchi, ephekwe ngale ndlela, iyanandi kakhulu kwaye icebile. Ukungabikho kwenyama kuhlawulwa ngamakhowe, kwaye ingcambu yesityambo esinamagatsha anamanzi unikeza ukutya okuyingqayizivele, elimnandi.
Amakhowe anomileyo - 150 g
iklabishi kvasshennaya - 400 g
amazambane - 5 amaqhosha.
i-anyanisi ezimhlophe ezimhlophe
ingcambu ye-celery - 100 g
fennel omisiwe - 20 g
ii-peppercorns - 8 ii-pcs
Iqabunga le-bay - i-2 pieces
Amakhowe omileyo ahlambulule, uthele iirazi yamanzi abilayo kwaye ushiye ihafu yehora etafileni.
Kwipuphu ye-koqweqwe loqweqwe lwe-eamel uthele ii-2.5 ilitha zamanzi abandayo, ubeke i-epiyiti ehlutshiwe kwaye ihlutshiwe, i-leaf leaf, i-1punipuni yolwandle yetyuwa kwaye uyizise kwimilenze ephezulu.
I-peel amazambane, uwachele kwiincinci ezincinane uze uziphosele emanzini abilayo.
Iiproti kunye neengcambu zezicabisi kufuneka zihlanjululwe, zinqunywe zibe zincinci kwaye zongezwe kwi-pan 15 imizuzu emva kweetatata.
Ngama-mushroom kwisiqhekeza esisodwa sitshisa i-liquide, unyuke kwi-gauze uze uthele kumhluzi omkhulu.
I-bulb yesibini kunye nama-mushroom iya kutyunjwa kwaye idizwe kwipani yokutshiza kuze kube ngumbala wegolide obumnandi. Emva koko faka epanini kwaye udibanise ngobumnene.
Xa isobho lipheka kwakhona, velisa iklabishi, ubilise imizuzu eyi-10, ixesha lonyaka ngetyuwa kunye nepepper, gqubuthele kwaye uvumele ukuba ibenze i-15-20 imizuzu. Etafileni, sebenzela kushushu.
Ikhekhe lamabhanana ebhanana ngamantongomane, iresiphi kunye nesithombe
Ukubunjwa kwesi sidlo esiphucukileyo esibhakabhaka kubandakanya i-stevia yemvelo, kunye neoli yezolimo kunye neentlobo ezimbini zeziqhamo ezihlambulukileyo zinikezelwa ukuthambisa okufunekayo.
iibhanana - iziqwenga ezi-3
ioli yemifino - 120 ml
i-stevia - 125 g
i-vanilla - 1 tsp
i-apula puree - 125 ml
amantongomane - 150 g
i powder baking - 1 tsp
Iglasi Lokutya Olongezelelweyo Iiklasi - 250 g
isinamoni - ½ tsp
Ubhanana imizuzu engama-20 ubhaka kwi-oven, uphelelwe kwi-180 ° C, uze uhluthe isikhumba uze uguqe ngokuvumelana ngokufanayo.
Ioli yohlaza idibanisa kunye ne-vanilla kunye ne-stevia, ngokukhawuleza igubuzela ngemfoloko kwaye yongeza kubhanana. Emva koko faka i-apple puree uze udibanise ngokupheleleyo.
Umquba uhlanjwe ngesihlunu sekhitshi, udibanise nesinamoni, udibanise nazo zonke ezinye izithako uze uxoke inhlama yeplastiki.
Ifom enganyangekiyo ifumaneka kakhulu kunye neoli yohlaza kwaye igcwaliswe ngesidlo sokuvavanya. Phezulu ngamantongomane aqingqiweyo kwaye uthumele kwi-oven. Bhaka ngeyure e-190 ° C.
Ukugqiba umkhiqizo opholileyo, ususe kwi-mold, uthathe iinqununu uze usebenze.
Khangela ukhetho olukhethekileyo lweephepheni zokutya ezimnandi zePasika apha.
Indlela yokuzila nokuqala apho, iingcebiso zevidiyo ezivela kumfundisi
Ukuba awukwazi ukugcina iinkonzo zangaphambili ezingcwele kunye neenkcubeko, qaphela le vidiyo. Apha u-actress archpriest waseSt. Michael, i-Archangel Cathedral, utshela ngokucacileyo oko ungadla ngokukhawuleza ngaphambi kwePasika kunye nendlela yokuchitha iVeki yePasa.
Ikhekhe lePasika kwiebhaka
I-Easter curd (ukusuka kwikotishi ye-kottage)
I-Easter hare evela kwisizi
I-Beef Gulf "Amagatye"
Isaladi ye "Easter wreath"
Milkshake, iresiphi elula
Izizathu zengqondo-zengqondo zomtshato
Indoda kunye neNkwenkwe: Ubudlelwane bezesondo
IHoroscope yeziganeko ezilungileyo 2018 kuzo zonke iimpawu ze-zodiac
Iindlela zokupheka ezona zizonwaba zokutya
12 iimpawu zokuxhomekeka kwezesondo
Awukwazi ukunqanda ubomi obumnandi: amahotele amanqabileyo kwihlabathi